Ogaden News Agency (ONA) – Booliskii caadiga ahaa oy ku socoto Bahdil, Xadhig iyo Eri + Xogo kaloo muhiim ah
Booliskii caadiga ahaa oy ku socoto Bahdil, Xadhig iyo Eri + Xogo kaloo muhiim ah
Jahawareer badan oo dadka nooga soo waramay ay ku tilmaameen duufaan ayaa hareeyay Jigjiga, arimahaa oo dadka sida aadka ugu guurgala dhaq-dhaqaaqa gumaysiga ay ku sheegeen inay salka ku hayso arima qarsoon oo sida la moodayo ka fog. Sawirka guud ayaa u muuqda inuu Cabdi iley qaska wado isagoo ula jeeda inuu tirtiro raadadkiisii hore, hasa ahaatee talaabooyinka qaarkood mafulin kareen Cabdi iley kali ahaantii.
Waxaaa horey naloo soo gaadhsiiyay inuu maaamulka dhexdiisa ka jiro kala shaki oo qaar badan lagu shaabadeeyay inay hoosta kala shaqeeyaan ONLF, taasoo keentay in laga bilaabo Jigjiga waxa loogu yeedho Gam Game oo ku sucoda gaar ahaan booliiska caadiga ah ee gobolka oo laga soo kaxeeyay 9ka gobol ee Ogadeniya. Yaa ka dambeeyay arintaa? Maxaase loola dan leeyayay? Waa su’aalaha ay dadka isweydiinayaan, wxaase hubaal ah inay Jeneraaladii Cabi iley la shaqaysan jiray arintaa wax ka ogyihiin. Waxayna u badinayaan dadka sida hoos ahaaneed ula socda waxyaabihii ka dhacay Ogadenya 5tii sanee la soo dhaafay inay arintan salka ku hayso in la qariyo jariimadii laga galay dadka shacabka ah, gaar ahaan reer guuraaga. Arintaa oo eedeyma badan oo caalami ah laga gudbiyay dawladda Itobiya iyo shirkadaha shidaalka baadha oo iyaga qudhooda raadad badan uu soo galay ah in daraadood dad badan oo shacab ah loo dhibaateey.
Sidan Horay usheegnay waxaa Xabsiga loo taxaabay Komshinerka police-ka Mahamed yare, waxaa sidoo kale xabsiga la dhigay korenal Jamal Komishinerkii Asluubta oo ahaa xabsiyada Gobolka guud ahaan ninkii madaxda ka ahaa, ku xigeenkiisii Shine Cabdi badil. Waxaa magaalada dhexdeeda lagu arkayaa iaydoo maxaabiis lawado ku labisan dharkii booliska. Ninka nooga soo waramay arintaa ayaa tiro ahaan ku qiyaasay in ay dhan yahiin ilaa boqol inkastoo aan la xaqiijin karin tirada dhabta ah ee xidhan, laakin suuqa waxaa kujira in boolis farabadani ay xabsiyada ka buuxaan.
Waxaa xabsiyada loo dhiibay hadda oo ku magacaaban Taliyaha Asluubta Caynsane sheikh Maxamed oo aan waligii soomarin boolis laakin ahaa Shi,Halaqe Luyupolice ah.
Xadhigan madaxda booliska iyo xil ka qaadidan ayaa 2 arimod sabab looga dhigay;
1- Qarkood waxaa lagu eedenayaa in ay Xidhiidh la leeyihiin mucaaradka halka qaaar kale agu eedeenayo inay sir bixiyeen.
2- Waxa kaloo ay dadka caadiga ah is-dhex wadaan in laga cabsi qabo in ay fududeeyaaan boolisku xil ka qaadista cabdi iley maadaama la og yahay mawqifka luyupolice ka.
Dhinaca kale waxaa la hadal hayaa inuu Axmed Sheikh uu Adis abab ka imaanayo isagoo ay kenayaana ciidamada fadarelku si uu shirar ugu qabato Jigjiga. Arintan inkastoo aan la hubin, hadana waxay muujinaysaa sida dadweynaha dagan Jigjiga ay u neceen cabdi iley iyo kooxda qawleysatada ah ee ku xidhan isaga uuna ugu horeeyo Jenenka fadhiya Harar.
Waxaa kaloo jira warar muhiim ah oo waqtiga ku haboon aan idinla socodsiin doono kuna saabsan xidhiidhka sii kala furanaya ee ka dhexeeya Cabdi iley iyo kooxdii Ibraahim dheere, ka dib markay soo baxeen arima muujinaya inuu Ibraahim dheere dacwada ka gudbiyey. Arimahaa oo aanan doonaynin in aan ka hordhacno ayaa kayd inoo ah.